LEGO Super Mario 71360 Mario Startသင်တန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
16 / 06 / 2020 19 / 08 / 2020 ဂရေဟမ် 2798 Views စာ 1 မှတ်ချက် 2020, Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း, Lego, Lego စူပါမာရီယို, စူပါမာရီယို
Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း အခင်းအကျင်းရှိအခြားအစုများကိုသော့ဖွင့်ခြင်း - ဤသည်အသစ်အတွက်ဝန်ခံချက်၏ထိုက်တန်သောစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် Lego စူပါမာရီယို အဓိကလား
theme: စူပါမာရီယို စျေးနှုန်း: £ 49.99 / $ 59.99 / € 59.99 အပိုင်းပိုင်း: 231 ရရှိနိုင်ပါ: ယခု
သြဂုတ်လ 1 တွင်, Lego ပရိသတ်များသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိမ့်မည် စူပါမာရီယို theme, Nintendo နှင့်ပူးပေါင်းလေးနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ရလဒ်။ ကစားနိုင်သောဗီဒီယိုဂိမ်းမှုတ်သွင်းခံအတွေ့အကြုံများကိုပေးအပ်ရန်၊ အဓိကနောက်ကွယ်မှအဖွဲ့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးကိုဗဟိုပြုနေသည် စူပါမာရီယို ဝင်သူကိန်းဂဏန်း Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း။ ဒီတစ်ခုက set ကိုအရေးမပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေးအတွင်းရှိအခြား set ကိုသော့ဖွင့်။
Mario St နှင့်အတူစွန့်စားမှုများတွင်ပစ္စည်းသုံးခုအမှန်ရှိသည်artအခြားအစုံများထဲမှများများစားစားရရန်လိုအပ်သည့်သင်တန်း။ ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာမာရီယိုကိုယ်တိုင်၊artပုံးနှင့် finish ကိုအလံ ing ။
Lego စူပါမာရီယို တစ် ဦး ကိန်းဂဏန်းကျက်သရေနှင့်အတူထုပ်ပိုးသည်အတိုင်း။ သူကသွင်ပြင်လက္ခဏာများ Lego မျက်စိ, ပါးစပ်နှင့်ရင်ဘတ်။ သူဖွင့်လိုက်တဲ့အခါသူက "Lego Mario အချိန်” နှင့်ချက်ချင်းမျက်တောင်ခတ်သည်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါသူတို့ဟာအတော်လေးမှောင်မိုက်လာကြပေမယ့်မျက်လုံးတွေဟာတကယ်ကိုတောက်ပနေပြီးပုံကိုရှင်သန်နေစေနိုင်သည်။ စာရေးကိရိယာနေစဉ်သူလှည့်ကြည့်။ သူ၏နောက်ကျောပေါ်တွင်အိပ်သောအခါသူအိပ်ပျော်သွားပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းအိပ်ပျော်သွားသည်။ အထက်သို့တက်။ တက်သောအခါသူက“ yahoo” ကဲ့သို့သောနှစ်သက်ဖွယ်အသံများကိုပြုလုပ်သည်။
မာရီယို၏အသံအားလုံးသည်စစ်မှန်သည်။ ဂိမ်း၏အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်သော beep များသည်သူသည်သင်တန်းကိုလှည့်ပတ်နေစဉ်အတွင်းသူ၏အသံနည်းနည်းမှထုတ်လွှတ်သည်၊ သင့်လျော်သောအချိန်၌အသုံးပြုသောဂိမ်းမှအခြားအသံများစွာဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီမှာစာရင်းပြုစုဖို့အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပရိသတ်တွေသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့ထိုသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စိတ်အားထက်သန်ကြလိမ့်မည်။
သူလည်းအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ် ပုံတွင်အပိုင်းအစခုနစ်ပိုင်းသာပါဝင်ပြီးအဓိကနှစ်ခုမှာသူ၏ပုံသွင်းထားသည့် overalls နှင့်အီလက်ထရောနစ်ရှုထောင့်အားလုံးပါ ၀ င်ပြီးဘက်ထရီများကိုတပ်ဆင်ရမည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ တလုံးတည်းသောလည်ပတ်အပြားလေးခုသည်သူ့နားနှင့်ခလုတ်များကိုပေးသည်။ သူ၏ ဦး ထုပ်သည်အထူးပုံသွင်းထားသောဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။
LEGO Super Mario 71365 Piranha Plant Power Slide Expansion Set ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဆောက်အ ဦး စတင်သောအခါစိတ်ပျက်စရာအနည်းငယ်ရှိသည်။ တည်ဆောက်များအတွက်ညွှန်ကြားချက် p အဖြစ်သာရရှိနိုင်ပါသည်art - အခမဲ့ download လုပ်ပါ Lego စူပါမာရီယို အက်ပလီကေးရှင်း။ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့်လဲ? The Lego Group ကဒီဟာကိုဒီဂျစ်တယ်တိုးမြှင့်ထားသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တာကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအုတ်များနှင့်မာရီယိုသာလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီ app ဟာလိုအပ်ချက်ထက်ဆုကြေးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
ထိုဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းညွှန်ချက်များသည်လိုက်နာရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရှင်းလင်းသောညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ပရိတ်သတ်များအတွက်မူ sm ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ပို၍ ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ဆိုးစရာတစ်ခုခုရှိသည်art စာမျက်နှာများမှတဆင့် leafing ထက်တည်ဆောက်ရန် device ကို။ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုလုံးအပါအ ၀ င်ကောင်းပါတယ်။
ဒီဂျစ်တယ်ညွှန်ကြားချက်များရရှိနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးမှာကဏ္ complete တစ်ခုပြီးဆုံးသွားသည်နှင့်အပလီကေးရှင်းသည်ဗွီဒီယိုအတိုနှင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုဖော်ပြသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီသူတို့ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့နည်းနည်းကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။ အချို့ကအရာရာကိုသိသာထင်ရှားစေသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်, Bowser Jnr ကိုအနိုင်ယူခြင်းသည်ကစားသမားအားဒင်္ဂါး ၁၀ ခုပေးသည်။ သို့သော်ဗွီဒီယိုနှင့်မာရီယို၏မျက်နှာပြင်ကသူသည်တစ်ပြားတည်းသာတန်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ၎င်းက (မာရီယို) တစ်ပြားမှမကျသည့်တိုင်အောင်သူသည်ဒင်္ဂါး ၁၀ တန်တန်ဖိုးရှိသည်အထိသူအားတိုက်ခိုက်ရန်စက္ကန့် ၆၀ အတွင်းမည်သည့်အရာကိုမဆိုသုံးစွဲရန်မက်လုံးအနည်းငယ်သာရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။
LEGO စူပါမာရီယို ၇၁၃၆၈ ဘားပြုပ်၏သိုလှောင်မှုတိုးချဲ့ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အဆောက်အအုံပေါ်သို့ - ဒီစက်၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်လွယ်ကူပြီးဆောက်လုပ်ရေးအတွေ့အကြုံသည်ပေါင် ၄၉.၉၉ သတ်မှတ်ချက်နှင့်မတူပါ။ ဒါကအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး၊ အကွက်ထဲမှာဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်အေးမြတဲ့ sm ပါရှိပါတယ်art ကစားစရာကစားစရာဖြစ်သော်လည်းထို ၂၃၁ အပိုင်းအစများသည်အလွန်လျင်မြန်စွာအတူတကွလာသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။
အစုံတည်ဆောက်ပြီးစီးသောအခါ၎င်းသည်အမြင်အာရုံအလွန်ထင်ရှားပြီးမာရီယိုအားအော် ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်နဲ့အနီရောင်တွေဟာသူတို့ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေထွက်လာတာနဲ့တူတယ်။ ၎င်းကိုအတူတကွစုစည်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းရှိခြင်းဖြင့်ပလက်ဖောင်းနေရာများအကြားဆက်သွယ်မှုကိုကမ်းလှမ်းသောကျယ်ပြန့်သောပြားနှစ်ခုဖြင့်၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းရှိသည်။city.
ဒီရိုးရှင်းတဲ့၏ဒီဂရီအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာcity ကလေးများမကစားမီကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်စေရန်သေချာစေရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများစွာမှာအထူးသဖြင့်ပုံသွင်းထားသောဒြပ်စင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောကျယ်ပြန့်သောပြားနှစ်ခုဖြစ်သည်။ အခင်းအကျင်းတစ်ခုလုံးသည်ဤအပိုင်းအစအသစ်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ တစ်ခုမှာ tiles စင်တာနှင့်အတူ4×4ဒြပ်စင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုမှာ 10 × 10 ဒြပ်စင်အသစ်ဖြစ်ပြီးအလယ်၌တွယ်ကပ်အနည်းငယ်ပါသောအရာနှစ်ခုလုံးသည်ထောင့်များကိုလှည့်ပတ်ထားသည်။
၎င်းသည်လမ်းကြောင်းအသစ်များသို့ပြန်လည်အလွယ်တကူပြန်လည်ပြုပြင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ အတွေးအခေါ်သည်တိုက်နယ်ကိုအတူတကွထားရန်မှန်ကန်သော၊ မှားယွင်းသောနည်းလမ်းမရှိသောအယူအဆဖြစ်သည်။ သို့သော် Bowser Jnr သူရဲကောင်းအားအဆုံးတွင်အနီးဆုံးထားရန်မာရီယိုအနေနှင့်ထားရှိခြင်းကကျေနပ်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည် အောင်ပွဲခံအပြီးသတ်။
သီးသန့် LEGO စူပါမာရီယိုအင်တာဗျူး။ ။ ဂိမ်းကစားပုံ
နောက်ထပ်ကြီးမားသောအမြင်အာရုံထိတွေ့မှုသည်စိန့်အတွက်အသုံးပြုသောဖောင့်သေးငယ်သည်art နှင့် Finish နေရာများ - လူအများစုကြိုးစားပြီးဖတ်ရန်အလွန်သေးငယ်သော်လည်း၎င်းတွင်ပါရှိသည် classic စူပါမာရီယို ဖောင့်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားစစ်မှန်သောအာရုံစိုက်မှုကိုဂူဂဲလ်ဒီဇိုင်းတွင်ထည့်သွင်းထားပြီး၎င်းသည်ပန်းချီကား Bowser Jnr နှင့် Goomba ပေါ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိသည်။
ပေါ်သို့ရွေ့လျား အဆိုပါဂိမ်း, ဒီဆောင်ပုဒ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာစိတ်ကူးကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကစားနည်းကိုစမ်းသပ်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်းနဲ့ရှာဖွေခြင်းကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ Mario ကို 'St' တွင်နေရာချသည်art'စတုရန်းနှင့် 60 စက္ကန့် timer နေရာမှာစတင်သည်။ ယခုသူသည်လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ရပြီးအချိန်မကုန်မှီပန်းဝင်ရန်မဆင်းမီဒင်္ဂါးများကိုတတ်နိုင်သလောက်များပြားစွာသိမ်းယူရမည်။
မာရီယိုသည်အစိမ်းရောင်နှင့်အပြာရောင်ဒင်္ဂါးပြားများပေးသော်လည်းရောင်စုံအုတ်များတစ်လျှောက် 'လမ်းလျှောက်' ခြင်းအားဖြင့်ရမှတ်များရရှိသည်။ အနီရောင်မဟုတ်ဘဲ - အကယ်၍ ချော်ရည်ကိုကြာမြင့်စွာသုံးစွဲလျှင်၎င်းသည်သူ၏နိဂုံးဖြစ်သည်။ အထူးနေရာများသည်နောက်ထပ်အချက်များကိုပေးသည် - အဝါရောင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်မကျဘဲရပ်နေခြင်းအားဖြင့်မာရီယိုသည်ဒင်္ဂါးအမြောက်အမြားကိုတက်နိုင်သည်။ သူသည်မိုthe်းတိမ်ပေါ်သို့ခုန် ဝင်၍ လေထဲတွင်လှည့်လည်သွားလာခြင်းဖြင့်ဒင်္ဂါးများရရှိသည်။
မေးခွန်းမာကုပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်မာရီယိုအားသူ၏ခရီးစဉ်တွင်အီးကိုကမ်းလှမ်းရန်ကူညီမည့်အပိုဆုများပါရှိသည်xtra အချိန်၊ Star Power၊ ဒင်္ဂါး ၅ ခုသို့မဟုတ်ဒင်္ဂါး ၁၀ ခု၊ သူသည်အမှန်တကယ်ဗွီဒီယိုဂိမ်းတွင်သူရှာတွေ့နိုင်သည့်ကျပန်း power ups များကိုပုံတူပွားသည်။ လူဆိုးတွေကိုရိုက်နှက်တာကရမှတ်တွေများတယ်၊ ဒါကြောင့်ဇာတ်ကောင်ကသူတို့ကိုအနိုင်ယူဖို့ Goomba (သို့) Bowser Jnr အပေါ်ခုန်။ တက်နိုင်သည်။
ပထမဆုံးအကြိမ်ကစားနည်းကိုကစားခြင်းသည်မာရီယိုမည်သို့တုံ့ပြန်ပုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်များအတွက်ဒင်္ဂါးမည်မျှရရှိသည်ကိုမြင်ရခြင်းကအလွန်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းဖွင့်လျှင်, ကစားသောအခါ startဖန်သားပြင်သည်ကွက်လပ်ဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ရမှတ်ကိုပျက်ပြားစေပြီးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီအတွက်ဒင်္ဂါးမည်မျှရရှိသည်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။
ထိုပြိုကွဲခြင်းကအချို့သောလုပ်ဆောင်မှုများသည်အဓိပ္ပာယ်မရှိသောကြောင့်အမြင့်ဆုံးဒင်္ဂါးများကိုရှာဖွေသူများသည်အဝါရောင်မောင်းနှင်နိုင်သည့်နေရာတွင်အချိန်များစွာကုန်ဆုံးခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်အရှိဆုံးဖြစ်သည်။ ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပြောင်းလဲခြင်းက ပို၍ ပျော်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဒင်္ဂါးပြားအနည်းငယ်သာထုတ်ပေးသည်၊ ဗွီဒီယိုဂိမ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများမပါဘဲဗီဒီယိုဂိမ်းစိန်ခေါ်မှုပြိုကွဲသွားသည့်နေရာတွင်အောင်မြင်မှု၏အဓိပ္ပာယ်မှာမရှိ။ အဲဒီမှာ။
ခေတ်သစ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အထင်ရှားဆုံးသောအထင်ရှားဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် Lego အစုံသူတို့ရဲ့တည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မကြာသေးမီကထုတ်ပေးမှာကြည့်ရှု 75275 A- တောင်ပံ Starfighter နှင့် 21322 Barracuda ဂလားပင်လယ်အော်၏ပင်လယ်ဓားပြအရွယ်ရောက်သူများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့်တည်ဆောက်မှုများကိုအတူတကွစုစည်းထားပြီး၎င်းတို့ကိုကောက်ယူ။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး Lego စူပါမာရီယို။ အစုများသည် connector element များကို သုံး၍ ချိတ်ဆက်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းကို table top ပေါ်တွင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။ set up ပြီးတာနဲ့ flimsy plate-and-connector connection သည် ap ကိုချိုးဖဲ့သောကြောင့်၎င်းကိုရွှေ့ရန်မကြိုးစားပါart။ စားပွဲပေါ်မှာထားသူများအတွက်မူ၎င်းသည်ကောင်းသော်လည်းအခြားခေတ်သစ်နှင့်မတူသည် Lego မော်ဒယ်လ်များကိုရွေ့လျား။ မရပါ။
Lego Super Mario 71372 Cat Mario ပါဝါ Up-Up ကိုပြန်လည်သုံးသပ်
အဆိုပါထိခိုက်လွယ်နောက်ထပ်ဂိမ်းစဉ်အတွင်းလာပါတယ်။ ဒင်္ဂါးများကိုစုဆောင်းရန်မာရီယိုသည်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်၊ ပလက်ဖောင်းများ၊ လီဗာများနှင့်လူကြမ်းများပေါ်တွင်ဈေးကြီး။ စီးရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာမာရီယိုအားတိကျစွာနေရာချထားရန်အရာတစ်ခုသို့အမြဲတမ်းနေရာချထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာပြဇာတ်အနည်းငယ်အပြီးတွင်အရာရာသည်ဖြစ်လိမ့်မည်art ragrag apart - ဒါကထူးဆန်းတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်ဖြစ်သွားပြီ၊ Bowser Jnr ရဲ့ခံတပ်လဲကျသွားလိမ့်မယ်art အစားလီဗာကိုနှိပ်သောအခါအထဲက popping ၏။
ရှင်းလင်းဖို့, ပြဇာတ်ကျိန်းသေလွှဲပြောင်းနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အယူအဆရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်က, က၎င်း၏တောက်ပရှုံးသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်မြှင့်တင်ရန်ပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ရန်ပရိသတ်များကိုအားပေးသည်arter pack သည်အမှန်တကယ်တွင်တိုတောင်းသောeအတွက်ချဲ့ထွင်ခြင်းများကို ၀ ယ်ယူရန်အကြံဥာဏ်ပေးသည်xtra အတော်လေးချွတ် - ချပြီးကစား၏ပေါကျကှဲမှု။
ပုံသွင်းပလက်ဖောင်းအပိုင်းပိုင်းနှင့်အခြေခံ p ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကြောင့်arts, ဒီအစုံတကယ်အားလုံးဂိမ်းအကြောင်းပါ - layout ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နှင့်ဂိမ်းကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းများအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမှန်တကယ်ကရည်ရွယ်ကစားနှင့်မသက်ဆိုင်သောဘာမှသို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အများကြီး။
LEGO Super Mario 71366 Boomer Bill Barrage တိုးချဲ့ခြင်းသတ်မှတ်ချက်ပြန်လည်သုံးသပ်သည်
၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဗေဒရှိသော်လည်းမော်ဒယ်သည် p ကိုမကြည့်ပါart.ရာဝတီ Lego gameplay ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်နှင့်တခါ, မေးခွန်းဖြစ်လာသည် ... အဘယ်ကြောင့် Lego? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမာရီယိုကစားစရာတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးအတူတကွချိတ်ဆက်ထားသောအခြေခံအပိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ buildable ရှုထောင့် p တူသောဒါဟာမှာလုံးဝမခံစားရပါဘူးartလိုအပ်ပါတယ်
၎င်းကိုပယ်ဖျက်ရန်လွယ်ကူပြီး 'အရွယ်ရောက်သူများအတွက်မဟုတ်ဘဲကလေးများအတွက်ဖြစ်သည်' ဟုပြောရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။ သို့သော်အထူးသဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောလူ ဦး ရေသတ်မှတ်ချက်သည်အားနည်းချက်များကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ 7+ အဖြစ်မှတ်သားထားသော်လည်း၎င်းသည်အနည်းငယ်ငယ်သောကလေးများအတွက်ဖြစ်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
ဒီအစုမှာအဓိကမဲနှိုက်ကမာရီယိုကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ ကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုသူကရယ်စရာကောင်းသောနည်းများဖြင့်တုန့်ပြန်သောကြောင့်ပုံတွင်အလွန်ကောင်းသည်၊ ကံမကောင်းစွာပဲသူ p သည်ဂိမ်းart မည်သည့်အသက်ရှည်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဒါဟာ st စဉ်းစားရကျိုးနပ်သည်artပျော်စရာကောင်း။ ထူးခြားသောအရာတစ်ခု၏အရသာကိုရရန် er ကိုထုပ်ပိုးပါ Lego ဒါပေမယ့်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့သူတို့လိုအပ်တာကဖြစ်နိုင်ပါတယ် စူပါမာရီယို ဆောင်ပုဒ်။
ဒီထုတ်ကုန်ကိုအားဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည် Lego Group မှ။
Mario St ။ နှင့်အတူ 71360 Adventuresartသင်တန်း မှာယခုကြိုတင်မှာယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com။ သင်ကူညီနိုင်သည် Brick Fanaticsငါတို့သုံးပြီး '' အလုပ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← Lego Super Mario စာရင်းအပြည့်အစုံ
Lego Super Mario 71372 Cat Mario ပါဝါ Up-Up ကိုပြန်လည်သုံးသပ် →
တစ်ခုမှာ "LEGO Super Mario 71360 Mario Startသင်တန်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း"
ငါအက်ပလီကေးရှင်းကိုရပေမဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေမရဘူး၊ ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ အရမ်းစိတ်ပျက်တယ်။